काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फेरि डिजेल पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ बढाएको हो । यससँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३६, मट्टितेल र डिजेलको भाउ ११९ रुपैयाँ पुगेको छ । बढेको मूल्य आज मध्यरातदेखि लागि हुनेछ । यसअघि निगमले गत कात्तिक १२ गते पनि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य […] The post फेरि बढ्यो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल जस्ता पदार्थमा चाडबाडको समयमा गरिएको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्रमा पार्ने प्रभावले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।...
भारतको मोतिहारीबाट ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट हाल डिजेल मात्रै आयात गरिँदै आएको छ । अब भने नेपाल आयल निगमले सोही पाइपलाइनको माध्यमबाट पेट्रोल र मट्टितेल समेत ल्याउने कार्यको थालनी गरेको निगमको २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले रातोपाटीलाई बताएका हुन् । अबको केही समयभित्रमै भारतको मोतिहारीबाट ल्याएको पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेलसमेत ल्याइने छ । पाइप लाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउँदा राज्यलाई ढुवानी भाडा बापतको ९ करोड रुपैयाँ मासिक फाइद
मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको माग
सोमबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनमा दुई रुपैयाँ र खाना बनाउने एल.पी ग्यासमा २५ रुपैयाँकादरले मुल्य बढाएको थियो।...
आजबाट पेट्रोलको मूल्य १३० रुपैयाँ, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासको कति?
काठमाडौं, भदौ ८ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलसहित खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको हो । डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढेको हो। अब पेट्रोल प्रतिलिटर १३०, डिजेल तथा मट्टितेल ११३ र हवाई इन्धनको मूल्य ८६ रुपैयाँ कायम भएको छ । […]
नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, ग्याँस तथा हवाई इन्धनको मुल्य बढाएको छ ।सोमबार रातीदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको मुल्य २-२ रुपैयाँ बढाएको हो । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको कारणले आन्तरिक बजारमा मुल्य समायोजन गरेको निगमले जनाएको छ ।नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर १३०, डिजेल-मट्टितेल ११३ तथा हवाई […]
नेपाल आयल निगमले शनिबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा हवाइ इन्धन (आन्तरिक उडान) को मूल्यमा २ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको १०८ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ८० रुपैयाँ पर्नेछ ।पछिल्लो पटक जेठ २ गते मूल्य बृद्धि गरी पेट्रोलको मूल्य १२३ रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेलको १०६ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ७८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरे पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैय
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य २÷२ रुपैंयाँले बढाएको हो। मूल्य बढेसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १२३ रूपैंयाँ, डिजेल १०६ रूपैंयाँ र मट्टितेल ७८ रूपैंयाँ कायम भएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाइएको छैन।
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमले आइतबार राती १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको हो। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई दुई रुपैयाँ घटाएको छ। पेट्रोल ९८ र डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ अब किन्न सकिनेछ। मुल्य घटेसँगै अब खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर १३ सय…